Maayarka cusub ee Bali-gubadle oo xilkii la wareegay | Somaliland.Org
December 29, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Maayarka Cusub ee Degmada balligubadle Md Cabdi iimaan Jaamac ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugala wareegay Mayorkii hore ee Degmadaasi Md Ibraahin Colaad.
Munaasabad lagu qabtay Hotel Al-xayaat ee magaaladaasi ayaa waxaa ka qayb galay Gudooiyaha Gobolka Balligubadle Md Jamaal Hurre.
Maayarkii hore ee Degmadaasi Md. Ibraahin Colaad. Ayaa uga mahadceliyey dadweynaha balligubadle iyo shaqaalaha dawladda Hoose ee degmadasi sidii ay ula soo shaqeeyeen mudadii uu xilka hayey, isagoo sidoo kalena faahfaahin ka bixiyey waxyaabahii u qabsoomay intii ay xafiiska hayeen.
Mayorka Cusub ee Degmada balligubadle Md Cabdi iimaan ayaa isna ka codsaday shaqaalaha iyo hawlwadeenada kale inay si wanaagsan ula shaqeeyaan si waajibaadka loo doortay ay uga soo baxaan.
Dhanka kalena Gudoomiyaha hay’adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Md Xuseen Cabdilaahi iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo oo kormeer shaqo ku jooga degmada balligubadle ayaa kulamo xidhiidh ah waxa ay la yeesheen guud ahaan isu duwayaasha wasaaradaha iyo hay’adaha dawladda ee Gobolkaasi.
Previous PostGudoonka Waxbarashadda Buuhoodle oo ka warbixiyay xaaladda waxbarashadaNext PostUrurka Haweenka ee Badar wanaag oo lacag caawimo ah ugu deeqay Caruurtii uu ka baxay Mujaahid Fanax	Blog